Mifanaraka amin'ny homamiadana | Fifanarahana Zodiac & Horoscope - Famantarana Zodiac
Fifandraisan'ny homamiadana: amin'ny fitiavana sy amin'ny fandriana
Mifanaraka amin'ny homamiadana:
Amin'ny fitiavana sy amin'ny fandriana
Rehefa teraka ambanin'ny Famantarana Zodiac ny homamiadana, indray mandeha am-pitiavana ny toetranao tsara indrindra dia mivoaka avy amin'ny fierena amin'ny maizina amin'ny volana.
Kanseram-panahy malemy ity, homamiadana mahery, homamiadana mahery fo ary foza miaro izay tiana voajanahary.
Raha vao mahita mpiara-miasa mety dia kely ny vintana hananana trista sisiny.
Monogamy dia mihazakazaka ao amin'ny ADN anao satria mankafy ny fialofana omena ny fifandraisana tsara ianao.
Lisitry ny fifanarahana momba ny homamiadana
Fifanarahana fitiavana amin'ny famantarana zodiaka 12 rehetra
Mampalahelo fa ny fiainana dia tsy tsara fanahy amin'ny fo Cancerian mora tohina foana. Rehefa mamadika anao ny olona iray dia mety hamela anao tsy hanana fanantenana tanteraka hatrany amin'ny fisorohana ny fifandraisana akaiky amin'ny ho avy noho ny tahotra ny fahatsapana toy izany indray.
Etsy ankilany, raha tsy manandrana mihitsy ianao ary tsy matoky ny safidy hafa dia irery. Ity dia lesona momba ny fiainana ho an'ny homamiadana: minoa ny fonao sy mihaino ny bitsibitsiky ny volana andriamanibavy mitarika anao. Misionera iray ianao hahita ilay vady tena fanahy iray izay azonao zaraina mandritra ny androm-piainany. Ny mpanao trosa dia tsy manao fampanantenan-poana. Tena mino izy ireo fa 'mandra-pahafatin'ny fizarana' ao amin'ny fanambadiana.
Raha mampiaraka homamiadana ianao dia fantaro fa ao ambadik'io ivelany matanjaka io dia mitoetra ao am-pon'ny tantaram-pitiavana sy ny fanahin'ny olona maro endrika. Ny fiaraha-miasa amin'ny Kansera dia nanjary sarotra kokoa noho izy ireo nanompo sampy ny ray aman-dreniny ary matetika mampitaha ny olon-tiany amin'ny reny na dadany. Izany dia satria ny Cancers dia tena maniry olona hanatevin-daharana azy ireo ao anaty akorany ary hanao trano. Amin'izany, ny Cancerian dia manana fiheverana tonga lafatra izay mitaky fotoana maharitra.
Tahaka ny volana, mihalalina sy mihena ny fahatsapana homamiadana anao. Ny fahalemem-panahy dia toetra iray mahazatra, ary indraindray izy ireo dia miteny ny sainy nefa tsy fantany ny fiovana anatiny. Izany dia mety hanimba daty iray raha tsy olona mahay mandanjalanja ianao izay mahita mihoatra ny teny henjana amin'ny toetran'ny foza ny foza izay mitahiry tahotra sy fisalasalana, ary mety naratra mafy teo aloha.
Ny mampifandanja an'io dia mitoetra ho mora tohina amin'ny olona tiany izy ireo. Rehefa marary ianao na tsy misy karazany dia ny foza no voalohany eo anilanao 'manatsara azy'. Manana dian-jaza matanjaka izy ireo (na ny tovolahy aza) ary miezaka ny mahita ny vahaolana ilainao.
Ny sasany amin'ireo famantarana mety indrindra amin'ny homamiadana dia misy Libra , TRONDRO SY Capricorn . Na dia ny zavatra tsara hita ao amin'ireo Sun Signs Cancers aza dia mitandrina hatrany.
Horefesin'izy ireo ny mety ho mpiara-miasa manandrana mamantatra raha afaka manangona fasika aminao soa aman-tsara izy ireo. Avelao izy ireo hanao toy izany. Ny olona mandroso amin'ny foza dia mahatonga azy ireo hitandrina sy hiaro tena.
Raha avelanao fotsiny izy ireo haka ny fotoanany, rehefa vonona izy ireo, dia fantatr'izy ireo ny fomba hahatongavany ho mpanetsika sy hihetsiketsika ara-pientanam-po.
Ny kanton'ny fiarahana sy ny fitaomana dia zavatra ankasitrahan'ity Star Sign ity. Tsy mila horonana haingana ao anaty ahitra na raharaha izy ireo - mitady fifandraisana marina, vady aman-draharaha ary vonona hiandry.
Raha vantany vao mahita namana ianao, ny instinct amin'ny homamiadana dia ny olon-tiana mamy sy be fitiavana na dia mila fanampiana aza indraindray.
Raha mahita homamiadana ianao ary mihevitra ny tenanao ho ilay karazana maniry fizakan-tena na detachment dia aza mitondra homamiadana am-pandriana. Ity dia fanomezana ara-pientanam-po lalina ho azy, ary iray izay hanokafan'izy ireo ny akorany marefo. Manantena ny hianatra zavatra betsaka momba ny vadinao mandritra ireo fotoana ireo, ary hiaina ranomaso vitsivitsy aza noho io famantarana rano io.
Mandritra ny fitiavana ny fanaovana cancer dia tia miresaka momba ireo fahatsapana akaiky ireo. Io no fomba iray anarahan'izy ireo ny olon-tiany. Ny foza dia tena mahay amin'ny fahitana sy fanatanterahana ny fanirianao, indrindra raha ampahafantarinao azy ireo hoe mila azy ireo izaitsizy. Manokàna fotoana ho an'ny preludes alohan'ny firaisana ara-nofo - fihetsika romantika; labozia mandrehitra labozia, mozika tiana ary mampihetsi-po.
Ny Cancers dia toa mifamatotra mafy amin'ny firaisana ara-nofo indrindra amin'ny fihetsiky ny tanana. Ankafizin'izy ireo ihany koa ny fitiavana amin'ny hazavan'ny volana miaraka amin'ny mpiara-miasa mitafy amin'ny fomba tsy ahafahanao manalavitra ny masonao.
Ny kansera dia miteny ny fitenin'ny fanomezana sy ny serivisy. Io sakafo maraina eo am-pandriana io dia hitarika bebe kokoa.
Tandremo fotsiny ny fomba fifandraisanao amin'ny homamiadana. Mihaino amin'ny fony izy ireo fa tsy ny lohany ary afaka manimba ny alina feno fitiavana tanteraka ianao na dia kely fotsiny aza.
Zava-misy momba ny homamiadana sy fikambanana metafizika
Daty: 21 Jona- 20 Jolay
Marika: Ny foza
Andian-teny lehibe: 'Tsapako'
Birthstone: Voahangy (Jona); Ruby (Jolay)
Nomery Vibration Fanisana 2 & Nomery 7
Loko: Violet , Green Green & Silver
Kambana Zodiac Sinoa: ONDRIN'I
Kambana Zodiac Shinoa mahatsikaiky: ONDRIN'I
Fikambanana Tarot Card: Ilay Kalesy (Kansera), Ilay Mpisoronabe (Volana)
Kristaly fanasitranana: robina , Amber, Moonstone , Aventurine
Kanseran'ny olo-malaza: Louis Armstrong, Harrison Ford, Ernest Hemingway, Tom Cruise, Khloe Kardashian, Jane Lynch
Mifanaraka amin'ny homamiadana amin'ireo famantarana zodiaka 12 rehetra
Aries sy homamiadana
Whew miresaka momba ny miovaova. Ny fifandraisana Aries sy ny homamiadana dia misy hafanana betsaka, saingy tsy ao anaty efitrano fatoriana daholo izany. Teraka hiady hevitra izy ireo.
Narary ny homamiadana noho ny teny manaikitra nataon'i Aries avy eo nitifitra ireo pinsy feno teny vitsivitsy voafidy tsara avy aminy. Malalaka loatra koa ny Aries, indrindra amin'ny ara-bola. Izany dia mitarika homamiadana iray hanelingelina indrindra ny teti-bolan'ny ankohonana.
Ity fifandraisana ity dia tsy mendrika ny tantara an-tsehatra.
Taurus sy homamiadana
Ny lalao Taurus sy ny homamiadana dia symmetry amin'ny tsara indrindra amin'ny Astrolojia!
Ireo famantarana roa ireo dia mankasitraka ny fitiavan'ny iray hafa sy ny faniriana filaminana. Na dia tsy mamorona be loatra eo am-pandriana aza ny Taurus, dia manamboatra an'io i Cancer ary manome ny saina tadiavin'izy ireo ihany koa, fa ny Bull kosa kosa dia mitazona ny lafim-bolana ho an'ny homamiadana.
Ireo ara-bola dia mitoetra ao amin'ny mainty mora foana ireto roa ireto ary mamorona trano feno famosaviana mahafinaritra.
Gemini sy homamiadana
Aza masiaka Krizy malala. Ity Gemini mamirapiratra tsara tarehy ity dia mahaliana anao loatra. Eny, mahita fahafinaretana lehibe ianao miaraka amin'ny firaisana ara-nofo noho ny toetra voajanahary Gemini, saingy mihena izany rehefa hitanao ny fahitana azy ireo manoloana ny raharaha ao am-po.
Ankoatr'izay Gemini dia fanahy malalaka izay avy amin'ny fahatsapana fa 'fananan'ny' iray hafa. Mifikira amin'ny akoranao ary miandrasa Sun Sign hafa handehandeha eny amoron-dranomasina.
Kansera sy homamiadana
Rehefa miaraka ny Cancers dia miala amin'ity tontolo ity ny firaisana!
Ny sisa amin'ny fifandraisana?
Tsy dia izany loatra.
Ireo onjam-pihetseham-po miova rehetra dia mampifamatotra azy roa amin'ny harato tena miankina sy be loatra. Tsy fahendrena ny hivoahan'ny Kanseran'ny akorany amin'ny famantarana iray hafa - ny habetsaky ny ratra lalina sy ny lolom-po dia avo loatra. Arovy ny tenanao.
Na ity dia jerena ho toy ny quickie na mandeha fotsiny.
Leo sy homamiadana
Amin'ny maha-Kansera anao dia misy fotoana mahatezitra ny fihetsem-ponao sy ireo fotoana hafa mahatezitra ny hormoninao. Leo mety ho valin'ny tolona roa.
Ny mpiara-miasa amin'i Leo dia mamoaka voajanahary voajanahary sy mivoatra izay mandanjalanja ny toetranao manga. Mandritra izany fotoana izany dia azonao atao ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana gab anao mba hanomezana fahafaham-po ny Leo amin'ny resaka mamy sy fandokafana mamy, izay hitany fa mahavariana tanteraka.
Amin'ny ambaratonga 1-10, ity fiaraha-miasa ity dia mahazo farafahakeliny 8 miankina amin'ny anton-javatra hafa ao amin'ny tabilao.
Virgo sy homamiadana
Ity dia fifandraisana iray izay eo ambanin'ny lohateny hoe 'azafady ary ampieseso'.
Na dia somary cerebral kely kokoa noho ianao aza ny mpiara-miasa Virgo dia misy zavatra bebe kokoa eo ambanin'ny tany ka mamelana ny toetranao ao anaty fitiavam-pitiavana sy fangoraham-po.
Mpinamana be ianareo avy amin'ny tsirairay, manana fahatakarana akaiky ireo mpiara-miombon'antoka toetra miavaka sy ny fomba ahafahanao mifanasoa.
Avelao hiaro anao ny Virgoanao raha tianao izy. Filokana azo antoka indrindra ho an'ny roa tonta.
Libra sy homamiadana
Eh, o! Misy olana lehibe ao amin'ny paradisa.
Ianareo roa lahy dia afaka manangana tontolo tsara tarehy sy maitso izay hipetrahana, fa ny mifampizaka ao anatin'io toerana io dia raharaha iray hafa tanteraka.
Libra dia tsy afaka mahatakatra ny toetran'ny homamiadana ary hitan'ny homamiadana fa tsy mankasitraka loatra i Libra ka hatramin'ny resaka tsy misy dikany. Samy tsy faly ny mpiara-miasa ary toa tsy afaka mifandray amin'ny fandriana koa.
Milaza izahay fa mandehana mafy amin'ity iray ity.
Scorpio sy homamiadana
Huzzah sy Hooray!
leo lehilahy sy vehivavy virjina ara-nofo
Ny fampitahana ny homamiadana sy ny scorpio dia singa dinamita iray amin'ny fanandroana miandry ny jiro. Ny namanao Scorpio dia tsy mila ady amin'ny fialonana satria mahatoky tanteraka amin'ny fifandraisana ianao ary manome fampiasam-bola mahery vaika. Mamaly am-pitiavana lehibe i Scorpio ary manana firaiketam-po tsy manam-paharoa.
Tsy vitan'ny hoe maharitra ihany io fifandraisana io, fa mety hihatsara ihany koa mandritra ny taona maro.
Torohevitra: aza miaina akaikin'ny mpifanila vodirindrina aminao - hanaitra azy ireo ianao amin'ny alàlan'ny fialamboly erotika amin'ny mamatonalina.
Sagittarius sy homamiadana
Tsy afaka ny ho mpinamana fotsiny ve isika?
Izany no teny filamatra tsara indrindra manintona ny homamiadana-Sagittarius.
Amin'ny maha-homamiadana anao dia ho hitanao fa milay loatra i Sagittarius ary matetika miovaova. Mandritra izany fotoana izany ny Sagittarian iray dia tofoka amin'izay heveriny ho filana tsy misy farany.
Ianareo roa dia toy ny porcupine an'ny aura samy hafa mandritra ny andro maro - prickly tsotra fotsiny ary mahasosotra.
Capricorn sy cancer
Toetra mifanohitra fa manintona ara-batana lehibe, fiadiana homamiadana sy Capricorn matetika no tsara kokoa ho an'ny finamanana noho ny fifandraisana feno fanoloran-tena.
Amin'ny maha-homamiadana anao dia maniry ny hisarika ny saina sy hahatsapa ianao. Capricorn dia tsy manam-potoana firy amin'izany, sahirana amin'ny fialamboly isan-karazany sy hetsika hafa ka hatramin'ny fotoana ahatsapanao fa voafintina ianao.
Manampy izany ny zava-misy fa manjary tezitra ny andaniny roa - amin'ny ankapobeny ny fiakaram-be dia be nefa tsy misy lafiny Chart hafa hiasa ho fehikibo azo antoka.
Aquarius sy homamiadana
Ho an'ireo Cancers rehetra mamaky an'ity dia tadidio - ny Aquarius dia tsara ao anaty sakaosy fa izany dia lavitra araka izay ho azon'ity Duo ity.
Ny fisarihana Aquarian anao dia normal satria ny Aquarius dia raisina ho 'famantarana rano very', fa tsy maharitra maharitra fotsiny. Amin'ny faran'ny andro, na firy na firy ny rano dia ampahany amin'ny tabilao Aquarius, dia mbola famantarana famantarana ny rivotra izy ireo. Rano + Rivotra = tadio.
Ity mpiara-miasa ity dia diso tafahoatra loatra ary tsy mankasitraka ny tsironao, ary mety ho mora tohina ianao amin'ny fanehoan-kevitra tampoka ataon'ny Star Sign ity.
Apetraho ao amin'ny departemantan'ny 'tongotra folo' ity iray ity.
Pisces sy homamiadana
Miresaka fitsangatsanganana am-pitiavana lava eny amoron-dranomasina sy fanaovana firaisana mampihetsi-po amin'ny surf!
Mandehana amin'ny onja!
Ny fiarahan'ny Pisces sy ny homamiadana dia tena mahomby sy mirindra. Ireo famantarana roa ireo dia manana fahatsoram-po sy fahatsapana izay manohana anao mandritra ny fotoana ratsy indrindra.
Ianao koa dia manana fitiavana, tantaram-pitiavana ary tsy fivadihana ho anao. Rehefa tonga ny fotoana fitiavanao manao dia ho hitanao sary an-tsaina ny sakaizanao Piscean ary vonona hikaroka hevitra vaovao miaraka aminao koa ianao. Manana amin'ny!
milamina ve ny aquarius sy ny libra
inona no dikan'ny famantarana ny zodiakako sinoa
hevitry ny 911 ao amin'ny Baiboly
taurus vehivavy virgo lehilahy eo am-pandriana